कुवेतमा १०२ जना महिला पुरुषलाई रोजगार । मासिक तलब ३५ हजार देखि ७० हजार सम्म हुने । - बैदेशिक पोष्ट
२०७९ बैशाख २६, सोमवार
कुवेतमा १०२ जना महिला पुरुषलाई रोजगार । मासिक तलब ३५ हजार देखि ७० हजार सम्म हुने ।
माघ ३, २०७८ १५;३४ मध्यान्ह प्रकाशित
काठमाडौँ । कुवेतको बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Ragd Hotel Apartments Company Kuwait मा नेपाली पुरुष तथा महिला कामदारको माग गरेको छ । यी कम्पनीले बिभिन्न पोस्टका लागि १०२ जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो । न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ ।
कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. ३५,२७७/- देखि ७०,५५४/- सम्म रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित ७० हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले श्यारोन म्यानपावर सर्भिसेस प्रा. लि. को कार्यालय प्रयाग मार्ग, बानेश्वर, काठमाडौँमा माघ १० गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, स्वदेशमा हुने बिमा खर्च र भिसा स्ट्याम्पीङ शुल्क, भिसा शुल्क, विदेशमा हुने मेडिकल खर्च, विदेशमा हुने बिमा खर्च र हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने छ । यो कम्पनिमा जानको लागि कहिँ कतै कसैसंग आर्थिक कारोबार गरेको पाएमा भिसा रद्द गर्ने भनेर म्यानपावर कम्पनीले चेतावनी दिएको छ । थप जानकारीको लागि वा डिमाण्ड हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु वा www.baideshikjobs.com मा जानु होला ।